Tsvaga iyo Arribes del Duero Natural Park | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | España, Chii chekuona
El Arribes del Duero yakasikwa paki Inzvimbo yakachengetedzwa iri munharaunda yakazvimiririra yeCastilla y León, iri padyo nemuganhu nePortugal. Iri pakati pematunhu maviri, Salamanca neZamora. Muchikamu chePutukezi, paki iyi yaive yatochengetedzwa muna 1998 pasi pezita reInternational Douro Natural Park. Munharaunda yeSpain yakachengetedzwa muna 2002.
Izwi rekuti arribes rinobva muchiLatin ad ripa-ae, zvinoreva kuti mahombekombe. Iyi paka yakasikwa inoumbwa ne nzira yenzizi dzinoverengeka, senge iyo Agueda, Duero, Huebra, Tormes, Uces uye Esla. Izwi iri rinoreva mafomu ematombo emabhangi ayo anoumbwa nekufamba kwemvura. Iyo nharaunda yakasikwa matiri isu tine zvinhu zvakawanda zvekuita uye kuona.
1 Nzira muArribes del Duero
2 Misha mupaki
4 Rwizi rwendo
Nzira muArribes del Duero
Muno mupaki wepanyama mune mizhinji yenzira dzekukwira izvo zvinogona kuitwa, zvimwe zvipfupi uye zvimwe zvakareba. Ruzhinji runomhanya munzvimbo dzakapfavirira, saka hadzisi dzakaomarara. Idzo dzinosvika pamisangano chaiyo ndidzo dzine kukwirira kwakakwirira mune mamwe mapoinzi. Nzira GR-14 uye GR 14 1 ndiyo inomhanya nepaki kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba kwemakiromita mazana maviri, ichibatanidza mataundi, asi zvimwe zvikamu kana dzimwe nzira diki dzinogona kuitwa. Zvese zvakadhindwa uye isu tinongofanirwa kuremekedza iyo yakasikwa nharaunda uye zvinoratidza zviripo.
El Sendero de las Merchanas inzira inomhanya kwemakiromita mapfumbamwe uye chii chinogona kuitwa nevana. Pamugwagwa wedenderedzwa unogona kuona nhare uye uchitevera rusvingo rwemasonry. Nzira yeSalcelle-Aldeadavila ine makiromita makumi matatu uye inokurudzirwa zvakanyanya kune runako rwemamiriro epasi. Kune akatiwandei ekuona padyo nerwizi kufungisisa vanosvika.
La Horsetail nzira Iyo ine chinhambwe chemakiromita mapfumbamwe uye mairi unogona kuona iyo Cola del Caballo Waterfall. Iwe unogona zvakare kuona muromo weiyo Uces rwizi muDuero, saka iri nzira diki asi ine mapoinzi ekufarira. Pamugwagwa unobva kuPereña uchienda kuMirador del a Ermita unofamba makiromita matanhatu kwaunogona kuona canyons dzenzizi uye unoendawo kuHermitage yeNuestra Señora del Castillo nemaonero eDuero neMount Berrocal. Nzira kubva kuMieza kuenda kuCerezal yakareba makiromita makumi manomwe uye yakagadzirirwa mabhasikoro. Iyi ndiyo chete yemimwe nzira yakawanda inogona kuteverwa muArribes del Duero.
Mukati mepaki yepanyama hapana kushomeka maguta madiki anoyevedza vane nzira yakanyarara yehupenyu. Dzimwe nzira dzinomhanya nepakati pavo asi tinogona kugara tichivashanyira vachisvika nemotokari.
Ahigal de los Aceiteros Iri taundi diki rine basa rakakura kugadzirwa kwemafuta. Mutaundi iri mune chechi ine aritari yechinyakare kubva muzana ramakore gumi nemasere rakagadzirwa naFelipe Cervera, aive mudzidzi weiye akakurumbira Churriguera.
Aldeadávila de la Ribera Yakadaidzwa naUnamuno semoyo wevaArribes uye ndozvazvinozivikanwa. Mutaundi iri unogona kushanyira iyo Arribeñas Majadas Ecotourism Museum uko kwaunogona kudzidza nezve ehupenyu hwembudzi. El Picón de Felipe ndiwo maonero eguta kwaunogona kuona rwizi uye dhamu. Iri dhorobha rinewo rayo rakagadzirwa pamhenderekedzo kwaunogona kuenda nechikepe kana kukwira ngarava. Mupaki unogona zvakare kuona mamwe madhorobha akadai seArgañin nechechi yeSan Bartolomé, Barruecopardo, Bermellar ine bhiriji pamusoro penzizi yeHuebra neCeltic forts, Cabeza del Caballo kana Fariza.
Kune akawanda maonero anotariswa mupaki iyi yepanyama, mamwe ari munzira dzekukwira uye mamwe anogona kuwanikwa nemota. Iyo Mirador El Torojón iri mutaundi reFermoselle, nemaonero makuru pamusoro peguta uye Arribes del Duero. Iri guta rinewo maonero eEl Castillo. Iyo Mirador Las Fallas iri pakati peVillarino de los Aires, uko kune zvakare iyo Mirador del Duero, ine nzvimbo yepikiniki yekuzorora. Iyo Mirador El Salto iri padyo neSaucelle, kuti ikwanise kuona maArribes nedhamhu. Iyo Penedo Durao Viewpoint iri muFrexoxo, muPortugal, uye ine akanakisa maonero epaki yepanyama.
Chimwe chezviitiko zvinonyanya kukurudzirwa muArribes del Duero ndizvo tora rwizi rukuru rwizi kunakidzwa neaya canyons uye neropafadzo maonero avo. Cruises inogona kutorwa kubva kwakasiyana nzvimbo. Chikepe cheFermoselle chinobva kuBemposta muPortugal. Iyo Arribes del Duero yezvakatipoteredza cruise inosimuka kubva kuMiranda do Douro Environmental Biological Station uye ndeimwe yeakakurudzirwa. Vilvestre rwizi cruise iri munzvimbo yeLa Barca, makiromita mashoma kubva kuVilvestre. Aya ndiwo mapoinzi matatu ekugona kuona nzvimbo idzi parwizi rwizi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Arribes del Duero yakasikwa paki
Shanyira iyo British Museum